3 NIGHT MINIMUM Sleeping Grizzly Den - Leli ikhaya elinobungani nezilwane ezifuywayo - I-Airbnb
3 NIGHT MINIMUM Sleeping Grizzly Den - Leli ikhaya elinobungani nezilwane ezifuywayo
Portola, California, i-United States
U-Plumas Pines unokuphawula okungu-107 kwezinye izindawo.
Ikhaya leLake Davis Mountain
(Leli khaya linenani eliphansi lobusuku obu-3) "I-Sleeping Grizzly Den" iyikhaya lemisedari laseBrithani Columbia Lindal elinemishayo emangalisayo nophahla oluphakeme. Yakhelwe egqumeni elinamafasitela amakhulu, abheke ehlathini. Ikhaya lakho leholide lentaba eliyiphupho...lilindile. Itholakala eduze kweLake Davis ngaphandle kwaseGraeagle, CA le ntaba emangalisayo yokuhlehla iyilokho iholide elimayelana nayo. Indawo eyimfihlo eyihektare eyodwa enokuthula, enhle futhi eseduze neChibi!
Uma unquma ukuletha isilwane sakho esifuywayo (umkhawulo wezinja ezi-2) kunenkokhelo yesilwane/isilwane esifuywayo esingu-$98.00 esizoyengeza ku-invoyisi yakho yokubhukha ngemva kokubhuka nathi.
P.S.....leli khaya linazo ezomisa izinwele ozozisebenzisa! Qiniseka ukuthi ufunda imithetho yasekhaya ngaphambi kokubhuka nathi. Ngaleyo ndlela, SONKE sisekhasini elifanayo!
ubusuku obungu-7 e- Portola
Yini ongayithandi ngokuba seduze nechibi futhi nokuba sezintabeni? Uzozizwa sengathi usemphakathini wokuphumula othokomele, nokho useduze kakhulu nedolobha, cishe imizuzu engama-20 phansi komgwaqo. Ukufinyelela kalula kuzifundo zegalofu ezi-5 endaweni ezungezile kanye nokushayela okulula ukuya edolobhaneni elihle laseGraeagle, CA.
Siyinkampani ephethe i-Vacation Rental evula izinsuku ezingu-7 ngesonto. Amahora ethu okusebenza nalapho siphendula izicelo nemibhalo yilena: 9:00 a.m. kuya ku-4:00 p.m., phakathi nenkathi ephezulu ukuze uphendule yonke imibuzo ongase ube nayo! U-Ellen ovela e-Plumas Pines Vacation Homes and Rentals
Siyinkampani ephethe i-Vacation Rental evula izinsuku ezingu-7 ngesonto. Amahora ethu okusebenza nalapho siphendula izicelo nemibhalo yilena: 9:00 a.m. kuya ku-4:00 p.m., phakathi…
Hlola ezinye izinketho ezise- Portola namaphethelo